Zvemukati mafirita uye kutonga kwevabereki kweGNU / Linux kugoverwa | Linux Vakapindwa muropa
Kune akawanda akagoverwa eGNU / Linux akagadzirwa Kune chidiki cheimba, zvakare nechinangwa chekudzidzisa. Isu takatomboongorora nekutaura nezvavo pane dzakawanda nguva, asi isu hatina kunyora zvakanyanya nezve mamwe mapurogiramu anodikanwa kana tichitaura nezvevana uye ndiko kudzora kwevabereki uye mafirita emukati kuitira kuti vasakwanise kuwana nzvimbo dzavasingafanirwe kuwana. Nzira yakanaka yekudzivirira vana kubva pane zvisina kukodzera zvingave kuburikidza nemumiriri nerubatsiro rwezvirongwa zvine mukurumbira seSquid kana kushandisa zvakananga iptables kudzivirira kupinda kune mamwe matunhu.
Asi kune zvakare zvirongwa zvinogona kuita kuti basa redu rireruke uye izvo zvakagadzirirwa kuitisa mhando iyi yezvinyorwa kana kuita se kudzora kwevabereki kune yedu yatinofarira distro, nekudaro tichisiya yakachengeteka kuitira kuti vana vedu vashandise tekinoroji pasina njodzi isingakoshe. Zvakanaka, izvi zvishandiso zvekutonga uye zvemukati kusefa ichava musoro wenyaya ino:
DansGuardian- Ichi chine simba rakavhurika sosi yemukati firita inoshanda pane ese kana angangoita ese maLinux kugoverwa. Inoda kumisikidzwa kubva kumutsara wekuraira, asi ine simba kunyangwe ichinetsa kana isu tiri vatangi.
Kudzora Kwevabereki: Mhuri Yehukama Sefa: Haisi chirongwa pachayo, asi chiwedzero cheMozilla Firefox browser yatinokwanisa kurodha pasi nekuisa. Chinhu chakanaka ndechekureruka, asi isu tinofanirwa kuziva kuti kana mwana akashandisa imwe bhurawuza, inenge isiri kuvharira zvemukati mewebhu.
Blocksi Webhu Sefa: ndeimwe yekuwedzera yewebhu webhu, asi mune ino nyaya yeGoogle Chrome. Sefa zvisina kukodzera zvewebhu pamwe neYouTube. Iwe unogona kunyange kudzikamisa maawa ekushandisa kuitira kuti mwana arege kupfuura muganho pamberi pechidzitiro.
Ehezve idzi hadzisi chete sarudzo dziripo, asi dzinonakidza kwazvo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Zvemukati mafirita uye kutonga kwevabereki kwekuparadzirwa kweGNU / Linux